Diyaaradaha Pakistan ayaa joojiyay duulimaadyadii Kabul kadib markii Taliban ay amar ku bixisay in la dhimo qiimaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Diyaaradaha Pakistan ayaa joojiyay duulimaadyadii Kabul kadib markii Taliban ay amar ku bixisay in la dhimo qiimaha
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Pakistan War Deg Deg Ah • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Diyaaradaha Pakistan ayaa joojiyay duulimaadyadii Kabul kadib markii Taliban ay amar ku bixisay in la dhimo qiimaha.
Iyadoo inta badan shirkadaha duulimaadyada adduunka aysan u duulin Afgaanistaan, tikidhada duulimaadyada ee caasimadda Pakistan, Islamabad, ayaa lagu iibin jiray $ 2,500 PIA, sida ay sheegeen wakiillada safarka ee Kabul, marka la barbar dhigo $ 120- $ 150 ka hor.
Dowladda Taalibaan ayaa ku amartay Pakistan International Airlines (PIA) inay jarto qiimaha tikidhada duulimaadka.
Pakistan International Airlines (PIA) waa diyaaradda kaliya ee caalamiga ah oo si joogto ah uga duushay caasimadda Afghanistan.
Jidku wuu joogsan doonaa ilaa “xaaladdu noqoto mid ku habboon,” sida ay sheegtay Pakistan International Airlines (PIA).
Sida laga soo xigtay Pakistan International Airlines (PIA), dawladda Talibanka ee Afqaanistaan ​​ayaa amar ku siisay shirkadda diyaaradaha, oo ah tan keliya ee caalamiga ah ee sida joogtada ah u duusha kana soo degta Madaarka Caalamiga ah ee Kabul, inay jarto qiimaha duulimaadyada illaa heerkii ka hor dhicitaankii dawladda Afgaanistaan ​​ee reer Galbeedka taageertay bishii Ogosto .
Jawaabta, Diyaaradda Pakistan International Airlines ayaa joojisay dhammaan duulimaadyadii ay ku tagi jirtay magaalada caasimadda ah ee Afgaanistaan, iyadoo faragelinta maamulka Taalibaan ku tilmaamtay “mid culus”.
“Duulimaadyadeennu waxay inta badan la kulmaan dib -u -dhacyo aan loo baahnayn sababta oo ah hab -dhaqan -xumada maamulka duulista Kabul,” ayuu yiri Abdullah Hafeez Khan, afhayeenka PIA.
Sida laga soo xigtay PIA, saraakiisha Taalibaan ayaa inta badan ahaa “kuwo sharaf -dhac ah” marna “jir ahaan si xun ula dhaqmay” shaqaale.
Jidka Kabul wuxuu ahaan doonaa mid hakad ku jira illaa “xaaladdu ay noqoto mid ku habboon,” ayuu raaciyay sarkaal ka tirsan shirkadda diyaaradaha.
Markii hore, Taliban ayaa ku wargelisay Diyaaradda Pakistan International Airlines iyo Kamaradaha Afqanistaan ​​ee Kam Air in hawlgalladooda Afgaanistaan ​​la joojin doono haddii aysan oggolaanin inay yareeyaan qiimaha ka soo baxay inta badan dadka reer Afgaanistaan ​​tan iyo markii ay Taliban la wareegtay.
Wasaaradda gaadiidka ee Afgaanistaan ​​ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in sicirka waddada “la isku hagaajiyo si loo waafajiyo shuruudaha tigidhka ka hor guushii Imaarada Islaamiga” ama duulimaadyada la joojin doono.
Duulimaadyada u dhexeeya Afgaanistaan ​​iyo Pakistan ayaa si aad ah u xaddidan tan iyo markii dib loo furay gegida diyaaradaha ee Kabul bishii la soo dhaafay ka dib daadgureyntii qasnayd ee in ka badan 100,000 oo reer galbeed ah iyo Afgaanistaan ​​oo nugul kadib markii Taliban ay qabsadeen Afghanistan.
Iyada oo ay sii kordhayso xiisadda dhaqaale oo sii kordhineysa welwelka mustaqbalka Afgaanistaan ​​ee hoos imanaya Daalibaan, ayaa waxaa jiray dalab culus oo ah in duullimaadyadu dibadda u baxaan, taas oo ay uga sii dartay dhibaatooyin soo noqnoqday oo ka soo gudbayay soohdinta dhulka ee Pakistan.
Ilaa 100 qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku xayiran yihiin dhoobada Kanada
Boeing ayaa soo saartay xamuul cusub oo ah 737-800BCF
Nederlaan waxay gashay xidhid cusub
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska ee Afrika oo la kulmay Guddoomiyaha Guddiga...
Mashruuca cusub ee Lufthansa ee iThemba Cape Town ee loogu talagalay...
Kansarka iyo Cilmi-baarista COVID: Doorka Cytokines